१०० बर्ष पहिलेको नेपालको टेलिफोन सेवा कस्तो थियो?कसरी बिकसित हुंदै गयो? | पहिलो बोली
१०० बर्ष पहिलेको नेपालको टेलिफोन सेवा कस्तो थियो?कसरी बिकसित हुंदै गयो?
१०८७ पटक पढिएको
अनुमानित पढ्ने समय : ३९ मिनेट
Published on: Saturday February 8, 2020 (1 year ago)
ब्रिटिश इन्जिनियरको डिजाइनमा नाङ्गो तार टाँगेर काठमाण्डूमा टेलिफोन सेवा
नेपालको सबैभन्दा पुरानो दूरसञ्चार सेवाप्रदायक नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले गत बुधवार १६औँ वार्षिक उत्सव मनायो।
नेपाल टेलिकमका रूपमा चिनिएको र ९० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारको स्वामित्व रहेको कम्पनीले १६औँ वार्षिक उत्सव मनाए पनि यो कम्पनी १६ वर्ष मात्र पुरानो भने होइन।
सरकारले सर्वसाधारणलाई शेअर बिक्री गर्ने निर्णय गरेर सरकारी स्वामित्वबाट पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भएपश्चात्‌को समय गणना गरेर १६औँ वार्षिक उत्सव मनाइएको हो।टेलिकमले आफ्नो वार्षिक उत्सव मनाइरहँदा नेपालमा टेलिफोन सेवाको सुरुवात भएको भने १ सय ३ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ।
नेपालमा टेलिफोन, आकाशवाणीजस्ता सेवा सुरु भएपछि तीनको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि सरकाले बनाएको निकायकै विकास भएर अहिलेको टेलिकम बनेको इतिहासकारहरूले लेखेका छन्।
Image caption१९७३ साल असार २० गतेको गोर्खापत्रमा प्रकाशित समाचार
Image captionत्रिपुरेश्वरस्थित पुरानो मोहन आकाशवाणी कार्यालय
Image captionब्रिटिश सम्राट जर्ज र रानी मेरी नेपालमा सिकार खेल्न आएका थिए
चन्द्रशमशेरले विसं १९६८ साल जेठमा टुँडिखेलमा एउटा समारोहको आयोजना गरी फर्पिङ जलविद्युत आयोजनाको तत्कालित राजा पृथ्वीवीर विक्रम शाहद्वारा उद्घाटन गराएका थिए।
त्यसक्रममा चन्द्रशमशेरले दिएको मन्तव्य विसं १९६७ साल जेठ २३ गतेको गोर्खापत्रमा छापिएको थियो।
उक्त आयोजना निर्माणमा मुख्य इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर बार्नाउ प्याउटे रहेको चन्द्रशमशेरले आफ्नो मन्तव्यमा पनि उल्लेख गरेका छन्।
त्यस्तै अर्का इन्जिनियरको नाम भने चन्द्रशमशेरले लिञ्ज भनेर उल्लेख गरेका छन्।
हुनत त्यसअघि नै वीरशमशेरका पालामा पनि ब्रिटिश इन्जिनियरलाई नेपालमा ल्याइएको पाइन्छ।
जोन ह्वेवल्पटनको ‘अ हिस्ट्री अफ नेपाल’मा उल्लेख भए अनुसार वीरशमशेरले काठमाण्डूमा पाइपबाट वितरण गरिने खानेपानी सेवाको सुरु गर्न ब्रिटिश इन्जिनियरहरू झिकाएका थिए।
उक्त कामका लागि विशेषज्ञका रूपमा ब्रिटिश इन्जिनियर बर्नाउ पुअन्टलाई लगाइएको पुस्तकमा लेखिएको छ।
काठमाण्डूमा टेलिफोन ल्याइएपछि टुँडिखेल नजिक पश्चिमपट्टि टेलिफोन अफिस खडा गरिएको विभिन्न सन्दर्भ सामग्रीहरूमा भेटिएको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ।
नाङ्गो तारमा सञ्चालन हुने उक्त पुरानो प्रविधिलाई ‘ओपन वायर म्याग्नेटो’ भन्ने गरिन्थ्यो।
काठमाण्डूबाट वीरगञ्जसम्म तार टाँग्नका लागि थानकोट, चिसापानीगढी, भीमफेदी भैँसे, हेटौँडा, अमलेखगञ्जको बाटो रोजिएको थियो।
चन्द्रशमशेरका पालामा सुरु भएकाले टेलिफोन सेवालाई ‘श्री चन्द्र टेलिफोन’ भन्ने गरिन्थ्यो।
उक्त पुस्तकमा उल्लेख भए अनुसार त्यसबेला टेलिफोनको महसुल तिरेपछि ‘श्री चन्द्र टेलिफोन’कै नाममा रसिद समेत जारी हुने गरेको थियो।
चन्द्रशमशेरले टेलिफोन सेवा सुरु गर्नुको कारण
इतिहासकारहरूका अनुसार चन्द्रशमशेर पश्चिमी शिक्षा लिने राणा प्रधानमन्त्रीमध्येमा पर्थे।
उनले तत्कालिन ब्रिटिश इन्डियाको कोलकातामा बसेर म्याट्रिकुलेसन गरेका थिए। त्यसैबेला उनले पश्चिमी विकासका केही झलकहरू देखिसकेको इतिहासकारहरूले लेखेका छन्।
सिंहदरबार पुस्तकका लेखक सागरशमशेर राणाले पनि चन्द्रशमशेरमा आधुनिक विकासको मोह रहेको उल्लेख गरेका छन् भने पुरुषोत्तमशमशेर राणाले श्री ३ हरूको वृतान्तमा पनि त्यस्तै ढङ्गले चित्रित गरेका छन्।
आवश्यक पर्ने थप सेनाबारे तत्कालै जानकारी लिन वा माग गर्नका लागि पनि ब्रिटिशहरूले नेपालसँग द्रुतखाले सञ्चार सम्पर्क स्थापित गर्न चाहन्थे।
त्यसैको पूर्तिका लागि ब्रिटिशहरूकै इच्छामा टेलिफोन लाइन नेपालसम्म विस्तार भएको हुनसक्ने कतिपयको तर्क रहने गरेको छ। इतिहासकार पंगेनी पनि ब्रिटिशकै कारण नेपालमा टेलिफोन भित्रिएको हुनसक्ने ठान्छन्।
उनी भन्छन्, “चन्द्रशमशेर ब्रिटेन भ्रमणमा पनि गएका थिए। त्यसबेला उनीहरूले चन्द्रलाई तिम्रो देशमा बिजुली छैन, टेलिफोन छैन, विश्वविद्यालय छैनन् जस्ता कुरा गरे होलान्। त्यसको प्रभाव परेर नै उनले नेपालमा विद्युत, टेलिफोन, सडक र शिक्षालयहरूको स्थापना गरेको हुनुपर्छ।”